कर्जामा विविधीकरण भएकाले अन्य लघुवित्तभन्दा फरक छौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता कर्जामा विविधीकरण भएकाले अन्य लघुवित्तभन्दा फरक छौं
२२ वर्षको किशोरावस्थादेखि नै विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न रहेका कृष्णबहादुर थापा साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । १० वर्ष अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रसको विभिन्न पदमा रहेका उनले अन्य संस्थाहरूमा करीब १२ वर्षको लामो अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । २०७४ साल कात्तिक १३ गतेदेखि कारोबार शुरू गरेको साधना लघुवित्तले अन्य लघुवित्तभन्दा फरक सेवा दिँदै आएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको समग्र गतिविधिमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानकी प्रजिता बुढाथोकीले उनीसँग गरेको कुराकानी :
साधना लघुवित्तले के कस्ता सेवाहरू दिँदै आएको छ ?
यस संस्थाले ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका व्यवसाय गर्न चाहने तर पूँजी नभएका व्यक्तिहरूलाई धितो तथा विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसमा पनि हामीले विशेषगरी महिलालाई सहज किसिमबाट कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । हामीले ग्रामीण ठाउँका जग्गा धितोमा राखेर पनि व्यावसायिक कर्जा प्रदान गरेका छौं । यस संस्थामा लघुवित्तको मर्मअनुसार समूहमा आबद्ध हुन चाहने पुरुषलाई सोही सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं ।
हालसम्म कतिओटा जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ ?
१० जिल्ला कार्यक्षेत्रका लागि स्वीकृति पाएको कम्पनी हो । १ वर्ष कारोबार अवधिमा हालसम्म संस्थाले आठ जिल्लामा २५ ओटा शाखा कार्यालय विस्तार गरी कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ । थप दुई जिल्लामा कार्यालय शाखा विस्तार गर्ने तयारीमा छौं ।
साधना लघुवित्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
यस लघुवित्तले कारोबार सञ्चालनको छोटो अवधिमै राम्रो व्यवसाय गर्न सफल भएका छौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा गर्न सफल भएका छौं । यस कम्पनीले हालसम्म झण्डै ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । छोटो समयको परिणामलाई हेर्दा हाम्रा वित्तीय सूचक सन्तोषजनक छन् । कम्पनीको अधिकृत पूँजी रू. १० करोड, जारी पूँजी रू. ७ करोड र चुक्ता पूँजी रू. ४ करोड ९० लाख रहेको छ ।
यस वित्तीय संस्थाले स्थापनाको छोटो समयमा सन्तोषजनक प्रगति गर्न सफल हुनुमा व्यक्ति विशेषको भन्दा पनि सम्पूर्ण टीमको सामूहिक प्रयासले नै हो । यस कम्पनीको व्यवस्थापन लामो समयदेखि लघुवित्त क्षेत्रमा नै क्रियाशील रहेका कर्मचारी रहेका छन् । साथै, सञ्चालक समितिमा पनि विगतमा व्यवस्थापकीय तहमा रही कार्यसम्पादन गरेका अनुभव भएको हुँदा कम्पनीले सफलता हासिल गरेको हो । अर्को महŒवपूर्ण कुरा व्यवस्थापनलाई सञ्चालकले काम गर्ने उचित वातावरण दिएमा संस्थाले प्रगति गर्ने हाम्रो बुझाइ छ । सोहीअनुसार व्यवस्थापनलाई अनुकूल वातावरण तथा मार्गनिर्देशन दिने गरेकाले हाम्रो संस्थाले छोटो समयमै प्रगति गर्न सफल भएको हो ।
लघुवित्त क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतीहरू पाउनुभएको छ ?
नयाँ लघुवित्त कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया रोकिए पनि अगाडि नै दर्ता भएर बसेका कम्पनी सञ्चालनमा आउने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा छ । लघुवित्त क्षेत्र अस्वस्थ बन्दै गएको अवस्था छ । कारण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त धितो सुरक्षण गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन्, तर लघुवित्तमा विनाधितो कर्जा प्रवाह गरिने हुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिने सम्भावना रहन्छ । यो दोहोरोपना नै लघुवित्तको मुख्य समस्या तथा चुनौती हो । यसबाहेक लघुवित्त क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको पनि अभाव छ । लघुवित्त संस्थाहरू विशेषगरी ग्रामीण ठाउँमा खोलिने हुँदा सूचनाका माध्यम प्रभावकारी हुँदैनन्, जसले गर्दा सोचेअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न कठिन छ ।
हाम्रो कम्पनी गोरखा जिल्लामा सबैभन्दा पछि सञ्चालनमा आएको कम्पनी हो । हामीभन्दा अघि धेरै लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा थिए । हाम्रो संस्था गोरखा जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कारणले पनि अरू लघुवित्तभन्दा फरक गर्नुपर्छ सदस्यको मन जित्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित परम्परागत लघुवित्तभन्दा आधुनिक लघुवित्तको अवधारण लिएर आएका छौं । हामीले दिने सेवा सुविधामा विविधीकरण छ । लगानीमा कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । व्यावसायिक रूपमा पर्यटन, होटल र किराना पसलमा पनि लगानी गर्ने गरेका छौं । साथै, हामीकहाँ वैदेशिक कर्जाको पनि सुविधा छ । जलविद्युत् शेयर कर्जा शीर्षकमा पनि लगानी गर्दै आएका छौं । त्यस्तै, शैक्षिक र आकस्मिक कर्जाको सुविधा पनि छ । यसर्थ, कर्जामा विविधीकरण भएका कारण पनि अरू लघुवित्तभन्दा फरक छौं जस्तो लाग्छ ।
कर्जामा विविधीकरण छ भन्नुभयो । कम्पनीको उद्देश्यअनुसार नै कर्जाको प्रयोग भएको छ त ?
अहिलेसम्म कुनै पनि सदस्यले कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएको छैन । हामीले कर्जामात्र प्रदान गरेका छैनौं । कर्जा प्रदानसँगै कर्जा सदुपयोगको जरुरी र कर्जा सदुपयोगबाट हुने प्रत्यक्ष फाइदाको विषयमा पनि अवगत गराएका छौं । सदस्यलाई प्रदान गरेको कर्जा शीर्षकको आधारमा गाउँस्तरमै गएर सचेतना कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका छौं । यसकै प्रभावले होला अहिलेसम्म हाम्रो खराब कर्जा रहेको छैन ।
कारोबारको १ वर्ष पूरा गरेको यस वित्तीय संस्थाले आर्थिक रूपमा जीवनमा परिवर्तन गर्न त सम्भव नहोला । तर, कम्पनीले ती सदस्यलाई संस्कार सिकाएको छ । फजुल खर्च गर्न नहुने रहेछ बचत पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना सदस्यमा बढाएको छ । ग्रामीण समुदायका पुरुष कमाउने र महिला घरधन्दामै सीमित हुने परिपाटी कम गराउन यो संस्थाले महŒवपूर्ण योगदान गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा साधना लघुवित्तले आफ्ना सदस्यलाई बचत गर्ने बानीको विकास गराएको छ । यसबाट अहिले नै केही सम्भव नभए पनि १/२ वर्षभित्रै यस संस्थाका सदस्यले जीवनमा केही परिवर्तन अवश्य गर्नेछन् ।
अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी वृद्धि अभियान जारी रहँदा लघुवित्त कम्पनीमा पनि आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
लघुवित्त कम्पनीको पनि पूँजी वृद्धि आवश्यक छ । त्यहीअनुसार प्रत्येक लघुवित्तले आफ्नो तयारी गरेको अवस्थामा हामीले पनि आगामी दिनमा राष्ट्र बैङ्कले यसका लागि निर्देशन गर्छ भन्ने लागेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएका छौं । अबको साधारणसभामा ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव लैजाँदै छौं । चाँडै आईपीओ जारी गरी सर्वसाधारणलाई पनि हाम्रो संस्थाको हिस्सेदार बनाउने तयारी गरेका छौं ।
राज्यले लिएको गरीबी निवारणको नीतिलाई लघुवित्त कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य स्वरूप यस वर्ष ३० ओटा शाखा पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ । विपन्न समुदायका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विशेषगरी महिलालाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराई उत्पादनमूलक काम गर्न प्रोत्साहन गरी आर्थिक रूपले सबल बनाई स्वावलम्बी समाज निर्माणमा सघाउने हाम्रो योजना छ । यसका लागि हामीलाई सबैको साथ आवश्यक छ । हाम्रा संस्थापक तथा शेयरधनीको विश्वास, सञ्चालकको एकता, व्यवस्थापन एवम् कर्मचारीको मेहनत र समूह सदस्यको इमानदारीका साथै नियमनकारी निकायको रचनात्मक सहयोगले हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नेमा विश्वस्त छौं ।